SPIRITUALITY Archives - Okwu Ugbu A
Ụzọ nta nke St. Paul
Ihe na Nwere ike 2, 2022 Nwere ike 3, 2022 by Mark
Na-aṅụrị ọṅụ mgbe nile, na-ekpe ekpere mgbe nile
ma kelee ekele n'ọnọdụ niile.
n'ihi na nka bu uche Chineke
maka gị n’ime Kraịst Jizọs.”
(1 Ndị Tesalonaịka 5:16)
KWUO M dere gị ikpeazụ, ndụ anyị abanyela n'ọgba aghara ka anyị malitere ịkwaga site n'otu mpaghara gaa n'ọzọ. N'elu nke ahụ, mmefu na nrụzi ndị a na-atụghị anya ya amụbaala n'etiti mgba a na-enwe na ndị ọrụ nkwekọrịta, oge imecha, na ụdọ ọkọnọ agbajiri. Ụnyaahụ, emechara m fụọ gasket wee were ogologo ụgbọ ala.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
EBE AHỤ bụ agha nke ukwuu. Agha dị n'etiti mba, agha n'etiti ndị agbata obi, agha n'etiti enyi, agha n'etiti ezinụlọ, agha n'etiti di na nwunye. Eji m n’aka na onye ọ bụla n’ime unu bụ ndị e merụrụ n’ụzọ ụfọdụ n’ihe mere n’ime afọ abụọ gara aga. Nkewa nke m na-ahụ n'etiti ndị mmadụ dị ilu na omimi. Ikekwe ọ dịghị oge ọzọ n'akụkọ ihe mere eme nke mmadụ nke okwu Jisọs metụtara ngwa ngwa nakwa n'ọ̀tụ̀tụ̀ buru ibu otú ahụ:Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Na-enyefe ihe niile
Ihe na January 22, 2022 January 23, 2022 by Mark
Anyị ga-ewughachi ndepụta ndenye aha anyị. Nke a bụ ụzọ kachasị mma isi nọrọ na kọntaktị gị - gafere nyocha. Debanye aha Ebe a.
NDỊ a ututu, tupu o si n'àkwà bilie, Jehova tinyere Novena nke Ahapụ n'obi m ọzọ. Ị maara na Jizọs kwuru, sị: "Ọ dịghị novena dị irè karịa nke a"? Ekwere m ya. Site n’ekpere a pụrụ iche, Onye-nwe wetara ọgwụgwọ a chọrọ nke ukwuu n’alụmdi na nwunye na ndụ m, ma na-aga n’ihu na-eme otu ahụ. Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Novena nke Ahapụ
Ihe na January 22, 2022 January 22, 2022 by Mark
by Ozoemena Nsugbe Dolindo Ruotolo (afọ 1970)
EBE AHỤ bụ ihe na-eme nke anyị kwesịrị ịṅa ntị na ya, ihe Onyenwe anyị na-eme, ma ọ bụ mmadụ nwere ike ikwu, kwere. Ma nke ahụ bụ iyipụ nke Nwunye Ya, Ụka Nne, uwe nke ụwa na ntụpọ, ruo mgbe o guzo ọtọ n’ihu Ya.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Nrubeisi Dị Mfe
Ihe na November 9, 2021 November 9, 2021 by Mark
Tuanu egwu Jehova, bú Chineke-gi;
ma debe kwa ụbọchị nile nke ndụ gị;
ukpuru-Ya nile na iwu-nsọ-Ya nile nke Mu onwem nēnye unu n'iwu;
ma si otú a nwee ogologo ndụ.
Ya mere, nuru, Israel, lezi-kwa-nu anya idebe ha;
ka i wee too na ime nke ọma karị.
dika okwu Jehova si di, bú Chineke nke nna-unu-hà;
inye gi ala nke miri-ara-ehi na manu-aṅu nērù nime ya.
(Akuko mbuỌktoba 31, 2021)
Were ya na ọ bụrụ na a kpọrọ gị ka ị hụ onye na-eme ihe nkiri kasị amasị gị ma ọ bụ ikekwe onyeisi obodo. O yikarịrị ka ị ga-eyi ihe mara mma, dozie ntutu gị nke ọma ma na-akpa àgwà ọma gị.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Ọnwụnwa nke Ịda Mmadụ
Ihe na September 2, 2021 September 2, 2021 by Mark
Nna -ukwu, anyị rụsiri ọrụ ike n'abalị niile, ma anyị enweghị ihe ọ bụla.
(Ozioma nke taa, Luk 5: 5)
Oge ụfọdụ, anyị kwesịrị idetụ ire adịghị ike anyị ụtọ. Anyị kwesịrị inwe mmetụta na ịma ike anyị n'ime omimi nke ịbụ anyị. Ọ dị anyị mkpa ịchọpụta ọzọ na ụgbụ nke ike mmadụ, mmezu ya, ike ya, ebube ya ... ga -apụta efu ma ọ bụrụ na ha enweghị Chukwu. Dị ka nke a, akụkọ ihe mere eme bụ n'ezie akụkọ ịrị elu na ọdịda nke ọ bụghị naanị ndị mmadụ kamakwa mba niile. Ọdịbendị ndị kachasị ebube adịchala mma, ihe ncheta nke ndị eze ukwu na nke caesar apụọla, ma e wezụga maka mkpọmkpọ ebe n'akụkụ akụkụ ebe ngosi nka…Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Vinghụ n'anya zuo oke
Ihe na July 26, 2021 July 26, 2021 by Mark
THE “Okwu ugbua” nke no na obi m n’izu a gara aga - nwale, ikpughe, na ime ka ocha - bu oku doro anya n’ebe Isi nke Kraist no na oge elekere eruola mgbe o ghaghi aghaghi n'anya zuru oke. Kedu ihe nke a pụtara?Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Jizọs bụ Isi Omume
Ihe na Nwere ike 5, 2021 Nwere ike 6, 2021 by Mark
Chọọchị Expi nke Obi Dị Nsọ nke Jizọs, Ugwu Tibidabo, Barcelona, ​​Spain
EBE AHỤ bụ ọtụtụ mgbanwe dị oke njọ na-apụta n'ụwa ugbu a na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume soro ha. N'ihi “ihe iriba ama nke oge ndị a,” enyefere m otu akụkụ weebụsaịtị a oge ụfọdụ iji na-ekwu maka ihe ndị ahụ ga-eme n’ọdịnihu nke Eluigwe gwara anyị n’ụzọ bụ isi site n’aka Onyenwe anyị na Nwanyị anyị. N'ihi gịnị? Maka na onye nwe anyi n’onwe ya kwuru maka ihe n’iru n’abia ka thatka ghara ijide ya. N'ezie, ọtụtụ n'ime ihe ndị m bidoro ide afọ iri na atọ gara aga na-amalite ịpụta na ezigbo oge n'anya anyị. Na ime ihe n'eziokwu, enwere nkasi obi dị iche na nke a n'ihi Jizọs ebula ụzọ kwuo ihe ndị a.
A Ezi Christmas Akụkọ
Ihe na December 24, 2020 December 24, 2020 by Mark
IT bụ njedebe nke njem nkiri ogologo oge ịmegharị gafee Canada-ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 5000. Ahụ na uche m agwụla. Ke ima ikokụre akpatre ikwọ mi, nnyịn ikasan̄ake ikpere hour iba ikpọn̄. Naanị otu ebe ọzọ maka mmanụ ọkụ, anyị ga-apụkwa n'oge ekeresimesi. Elere m nwunye m anya ma sị, “Ihe m chọrọ ime bụ ịmụnye ọkụ na ịgha ụgha dị ka akpụ n’elu ihe ndina.” Enwere m ike ịnụ isi osisi.Gaa n'ihu Ọgụgụ →